लक्ष्मी खड्का - नारी
लक्ष्मी खड्काका लेखहरु
कुनैपनि व्यक्तिका लागि जीवनभरिको पुँजी हो, घर । आफ्नो घर अर्थात् वासस्थानसँग सबैको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएकै हुन्छ । त्यसैले घर र वरपरको वातावरण स्वच्छ, सफा र स्वस्थ हुन जरुरी छ ।
लक्ष्मी खड्का, आर्किटेक्टपुस ८, २०७७
ओसीबाना अर्थात् फ्लावर अरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने ?
जापानी भाषामा ‘ओसु’ भन्नाले थिच्नु हो र ‘बाना’ ‘हाना’ भनेको ‘फुल’ हो । तसर्थ ओसीबाना भनेको नै (थिचेर, सुकाएर तयार पारिएको फुलहरुको कला हो । तसर्थ यी सुकाएका फुल पातहरुलाई लिएर हामीले जस्तो पनि फुलका आकृति देखि लिएर एउटा सुन्दर दृश्यको आकृति समेत बनाउन सक्छौं ।
लक्ष्मी खड्का, आर्किटेक्टवैशाख १९, २०७७
कसरी गर्ने पर्दाको छनौट ?
कोठा ठूलो देखाउनकालागि पर्दाका बुट्टाहरु पनि सकेसम्म ठाडो अथवा भर्टिकल भएको छनौट गर्नु पर्दछ । यस्ता पर्दाको छनौटले कोठाको उचाई पनि ठूलो देखाउन मद्दत मिल्दछ ।
लक्ष्मी खड्का, आर्किटेक्टचैत्र २४, २०७६
बोन्साई, शब्द सुन्नेबित्तिकै चिटिक्क परेको सानो रुख अथवा बोट–बिरुवाको प्रतिबिम्ब हाम्रो मनमा आउँछ । समय परिवर्तनसँगै घरभित्रको आन्तरिक सजावटमा मात्र नभएर घरको बाह्य सजावटमा पनि त्यत्तिकै रुचि बढेको पाइन्छ । घरको बाह्य सजावटमा परिवर्तन गर्नु भनेकै घरको बनावटमा परिमार्जन गर्नुका अतिरिक्त घरको बाहिरी भागमा रहेको बगैंचाको रूप परिवर्तन गर्नु पनि हो ।
लक्ष्मी खड्का, आर्किटेक्टअसार २९, २०७६